1 TIMỌTI 5 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1TI 5)
1 TIMỌTI 5
Abarala okenye mba, kama jiri arịrịọ na nsọpụrụ gwa ya okwu dị ka ọ bụ nna gị. Na-agwa ụmụ okorọbịa okwu dị ka ị ga-esi gwa ụmụnne gị ị hụrụ nꞌanya okwu.
Na-emeso ndị bụ agadi nwanyị omume dị ka ndị nne, ma na-emesokwa ụmụ agbọghọ omume dị ka ị ga-esi mesoo ụmụnne gị nwanyị omume. Na-echekwa uche dị ọcha banyere ha.
Ihe ndị a bụ ihe i kwesịrị inye ndị chọọchị gị dị ka iwu, ka ụmụ Chineke mụta, ma na-emekwa ihe dị mma.
Ma nwanyị ọ bụla dị ya nwụrụ nke chọrọ ịbụ otu onye nꞌime ndị na-eje ozi na chọọchị, aghaghị ịbụ onye gbara iri afọ isii. Ọ ga-abụkwa onye lụrụ nanị otu di na ndụ ya nile.
Ma o kwesịghị ka a kpọbata ụmụ agbọghọ di ha nwụrụ nꞌòtù ụmụ nwanyị na-eje ozi na chọọchị. Nꞌihi na nwa oge nta gafee ha nwere ike lụọ di ọzọ, chefuo nkwa ha kwere na ha gaanọgidesi ike rụọra Kraịst ọrụ.
Ụdị omume a pụrụ iwetara ha ikpe ọmụma, nꞌihi na ha emezughị nkwa ha kwere na mbụ.
Ewezugakwarị na ha nwere ike lụọ di ọzọ, ụmụ agbọghọ dị otu a bụ ndị umengwụ, ndị na-atụfu oge ha na-akpa asịrị site nꞌotu ụlọ ruo nꞌụlọ ọzọ, na-etinye onwe ha nꞌokwu na-agbasaghị ha, na nꞌọrụ na-abụghị nke ha kwesịrị ịrụ.
Nꞌihi na ekwensu eduhiela ụfọdụ mee ka ha mehie, ma site na chọọchị gbapụ.
Ka m chetara gị ya ọzọ ndị ikwu na ibe nwanyị di ya nwụrụ kwesịrị igboro ya mkpa dịrị ya. O kwesịghị ka ha hapụrụ ya chọọchị. Nꞌihi na ọ bụ ọrụ chọọchị inyere ụmụ nwanyị di ha nwụrụ aka, ndị na-enweghị onye inyeaka nꞌebe ọ bụla.
Nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị, “Ejila ihe kechie ehi ọnụ mgbe ọ na-azọcha ọka, kama hapụ ya ka ọ na-eri nri mgbe ọ na-arụ ọrụ!” Akwụkwọ nsọ kwukwara nꞌebe ọzọ sị, “Onye na-arụ ọrụ kwesịrị ịnata ụgwọ ọrụ ya”.
Egela ntị nꞌebubo ọjọọ ọ bụla a naebo onye okenye karịakwa ma ọ bụ na ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ gbara ama megide ya.
Ọ bụrụ na ọ mehiere nꞌezie, kpọpụta ya baara ya mba nꞌihu mmadụ nile na chọọchị, ka onye ọzọ gharakwa iso omume ya.
Otu a kwa, ndị mmadụ maara ụfọdụ ihe ọma nke ndị ụkọchukwu na-eme, ma o nwere ụfọdụ ihe ọma ha na-eme nke na-agaghị apụta ìhè tutuu ruo oge ikpeazụ.
1 TIMỌTI 5:1
1 TIMỌTI 5:2
1 TIMỌTI 5:7
1 TIMỌTI 5:11
1 TIMỌTI 5:13
1 TIMỌTI 5:15
1 TIMỌTI 5:18
1 TIMỌTI 5:19
1 TIMỌTI 5:25